Kugujwe Elokukhothama KweMbube – eHowzit
Kugujwe Elokukhothama KweMbube
IZINKUMBI zamabutho akwaZulu ziholwa iSilo Samabandla onke uGoodwill KaBhekuzulu bezibuthene kwaDukuza njengalokhu kade kugujwa usuku lwamagugu abantu izolo mhla zingama-24 kuyo le ephezulu analapho bekubungazwa khona usuku lokukhothama kwaBhejane ephuma Esqiwini KaSenza Ngakhona Ilembe eleqa Amanye Amalembe Ngokukhalipha.
ISilo sizwakalise okukhulu ukukhathazeka ngendlela esithe sibona ngayo kunyathelwa kakhulu usiko LwaMaZulu , njengalokhu sikhale kakhulu ngendlela okwenziwe ngayo lomgubho saze zagxeka kakhulu isenzo somnyango wezobuciko sokuzama ukujika igama leholide eliyi Heritage day libizwe nge “Heritage Braai Day”
“Lolusuku lwanamuhla kwakukhalwa KwaZulu kudlule iqhawe Lesizwe, kuthanda ukungixaka manje uma sekuzovele kuthiwe lolusuku ngolokosa inyama. Thina lapha sihlangene ukuzokhala siphinde sikhulekele isizwe. Siyabonake ukuthi kukhona abafuna ukusihlakaza singiZulu angeke sivume futhi lokho angeke kwenzeke kusakhona mina, asingachukuluzwa-ke ngoba asifuni ukuzithola sesisenkingeni” kubeka uZwelithini.
Asigcinanga lapho njengalokhu siphinde sagxeka kakhulu labo abahlala baneke izandla balinde;le uhulumeni ukuba abakhangeze sasho nokusho ukuthi kumele basukume bazibambele balime ngoba imali izogcina iphelile nakuyena bese beswela.
“Kubalulekile ukuthi siqaphele uma nibheka ukuntenga kwesimo serandi lokho kusho khona ukuthi indlala iyeza ngakho kubalulekile ukuthi sibuyele emasimini silime. Ngizwilike ukuthi kukhona amakhomishana aseqala ukuhlangana njengalokhu ngafaka isicelo sokuba kubuyiswe umhlaba wethu , ngiyazi futhi ukuthi kukhona abathi lomhlaba amaZulu awufuna wonke, asimaphutha vele owethu” kusabeka uHlanga Lomhlabathi.